Inona no Atao printy HTML? Mampiseho ireo fitaovana mahomby hamokarana lahatsoratra avy amin'ny doka HTML
Ny fitaovana manaisotra meta tags, Meta famaritana sy lohateny amin'ny ampahany votoaty. Mba hahazoana data avy amin'ny tahirin-tsoratra HTML tsotra dia mila manana fahaizana fototra kodia ianao. Saingy ho an'ny antontan-taratasy HTML be pitsiny, mila mampiasa fitaovana azo itokisana ianao. Misy karazana fandaharana hafa tahaka ny Java, Python, PHP, NodeJS, C ++, ary JS izay mila mianatra manaisotra votoaty avy amin'ny tahiry HTML tsotra sy sarotra. Ho an'ny tetikasa HTML mifandraika, ny fitaovana manaraka dia ny tsara indrindra.
1 - application developer company in Lebanon. Import. io:
Import. io dia iray amin'ireo mpandrafitra tsara indrindra sy HTML mpitrandraka amin'ny aterineto. Izy io dia miasa amin'ny fiteny maro sy fitenenana ary mamaritra ny rakitra HTMLo, mamokatra data amin'ny endrika latabatra sy lisitra. Ity programa ity dia manome safidy ny maka ny metadata ao amin'ny format JSON.
Amin'ny fampiasana Octoparse, azonao atao ny mamoaka tahiry be dia be avy amin'ny tranonkala samihafa. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana HTML mahomby indrindra ao amin'ny aterineto izay afaka manakona ny angona na amin'ny endrika mifototra sy tsy voaaro. Octoparse dia mandray ny angona ilaina avy amin'ny sary, rakitra HTML, rakitra an-tsoratra, horonan-tsary ary horonam-peo.
Mampiasa Uipath ianao, afaka mametraka mora foana ny fameno sy ny fikarohana. Izy io dia mpitroka HTML tena izy, mahagaga ary mahatalanjona ao amin'ny aterineto. Uipath dia mamaky ny angon-drakitra amin'ny endrika JS, Silverlight, ary HTML, manome anao ny valiny marina sy mahaliana.
Kimono dia miasa haingana haingana ary rakotra votoaty avy amin'ny newsfeeds sy ny vavahadin-tserasera. Tsara ho an'ny mpandrindra sy mpandrindra. Ity extraitaly HTML ity dia mamoaka ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala an-jatony ao anatin'ny adiny iray. Ny Kimono dia mahatonga anao ho mora ny manaisotra ny rakitra amin'ny endrika sary, horonan-tsary ary lahatsoratra.
Ny Scraper Screen dia iray amin'ireo mpanadio tsara indrindra izay manampy amin'ny famongorana ireo data avy amin'ny tahirin-tsoratra HTML samihafa. Izy io dia afaka manatanteraka asa sarotra sy mora ary manana safidy marobe sy safidy azo tsoahina avy amin'ny data mba hahazoana tombontsoa. Na izany aza, ny Screen Scraper dia mila programa kely sy fahaiza-manao. Plus, ity fitaovana ity dia miditra amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy avo lenta ary tsara ho an'ny antontan-taratasinao HTML.
Ny scrapy dia ny haavo fototra sy ny fandraketana fandrakofana screen izay tsara ho an'ny taratasy HTML anao. Rafitra matanjaka izy io, izay ampiasaina handikana ny tranonkala ary hamoaka mora foana ny angona avy amin'ny blaogy sy ny tranonkala. Ny scrapy dia mahomby amin'ny tahirin-kevitra HTML, ary afaka manara-maso ny kalitaon'ny angon-drakitrao ianao rehefa amperina izany.
ParseHub dia mametraka ny fangatahana amin'ny mpitsikilo amin'ny aterineto tsy misy fotoana ary mampiasa teknolojia fianarana maoderina hahafantarana ireo antontan-taratasy HTML ary manakona ireo angona ilaina avy amin'izy ireo. ParseHub dia mifanaraka amin'ny Linux, Windows sy Mac OS X.
Ny fitaovana SpamExperts dia mamaritra sy manafoana mailaka spam . Ankoatra izany, manova ny rakitra HTML anao izy ary manam-pahaizana mahery vaika HTML. Ny sasantsasany amin'ireo safidy tsara indrindra dia ny famakiana sy ny fametrahana ny rakitra HTML rehetra. Azo ampiasaina eo an-toerana sy eny amin'ny rahona izany. Ny SpamExperts dia manara-maso ny angon-drakitra misokatra sy miditra, manome anao ny vokatra tsara indrindra.